American Alsatian: Wolf ကဲ့သို့ခွေးများအတွက်လမ်းညွှန် - Breeds
American Alsatian: Wolf ကဲ့သို့ခွေးများအတွက်လမ်းညွှန်
ရှာဖွေနေသည် ဝံပုလွေကဲ့သို့ခွေး ? သင်တစ် ဦး အဖြစ်ခွေးတစ်ကောင်ကြီးမားချင်ပါသလား အဖော် ? သငျသညျအမေရိကန် Alsatian ရသင့်ပါတယ်။
ဤရှားပါးသည့်တောခွေးကောင်များသည်ဝံပုလွေများနှင့်တူနိုင်သည် နူးညံ့သိမ်မွေ့ နှင့် ဖော်ရွေ သတ္တဝါတွေ။
၎င်းတို့တွင်သူတို့၏လက်ရှိအသွင်အပြင်၊ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောစိတ်ထားနှင့်ကောင်းမွန်သောကျန်းမာရေးကို ဦး တည်စေသောထူးခြားသည့်မူလဇာတ်လမ်းရှိသည်။
ဤလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောသားရဲနှင့် ပတ်သက်၍ ဘာရှိသေးသနည်း။ Alsatian အကြောင်းပိုမိုသိရှိရန်ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။
American Alsatian ဆိုတာဘာလဲ။
သင်၏ American Alsatian ကိုမည်သို့ဂရုစိုက်ရမည်နည်း။
American Alsatian မှာကျန်းမာရေးပြproblemsနာရှိလား။
ကျွန်ုပ်၏ American Alsatian ကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ရနိုင်ပါသနည်း။
American Alsatian vs.
American Alsatian ဟာမင်းအတွက်သင့်တော်တဲ့ခွေးလား။
American Alsatian (AL-SAY-SHAN ဟုအသံထွက်သည်) သည်မိတ်ဆွေများအတွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောမျိုးစိတ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်။
များသောအားဖြင့်အဖော်ခွေးများသည်သေးငယ်ကြသည်။ ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သော Alsatian အဖြစ်ကြီးမားသောခွေးတစ်ကောင်ကိုအလားတူအခန်းကဏ္ on မှယူဘို့ရှားပါးပါတယ်။
လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၃၀ က Dire Wolf စီမံကိန်းဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။
American Alsatian သမိုင်း: အဆိုပါ Dire Wolf စီမံကိန်း
၁၉၈၇ ခုနှစ်တွင်ဝံပုလွေများအားစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်လာချိန်တွင် Lois Denny (ယခု Lois Schwarz) သည်ဝံပုလွေကဲ့သို့သောခွေးတစ်ကောင်ကို ၀ ံပုလွေသွေးမပါဘဲအလိုရှိခဲ့သည်။
Schwarz သည်ဝံပုလွေကဲ့သို့သောအဖော်ခွေးကိုဖန်တီးရန်ဆိုးရွားလှသောဝံပုလွေကိုအထူးရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်စီမံကိန်း၏အမည်ဖြစ်သည်။ အစစ်အမှန် ဝံပုလွေ သမိုင်းမတိုင်မီကတည်ရှိခဲ့ဖူးသော ၀ ံပုလွေများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုလူသိများသည်။ ၎င်းတို့သည် Pleistocene Epoch ကာလအတွင်းမျိုးသုဉ်းခဲ့သည် - လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၁၁၀၀၀ ကဖြစ်သည်။
၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် Schwarz သည် Alaskan Malamute နှင့် German Shepherd ကိုပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်ပထမဆုံးအမှိုက်သရိုက်များထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ မြောက်အမေရိက Shepalute ။ နှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်သူမသည်အင်္ဂလိပ်မာ့ဖစ်ဖ်နှင့် Anatolian / Great Pyrenees ရောနှောပေါင်းစပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
Alaskan Malamute နှင့်ဂျာမန်သိုးထိန်းရဲ့ ဦး ခေါင်း၏အရွယ်အစား၊ ခန္ဓာကိုယ်၊ ကြွက်သား၊ ခြေထောက်၊ အမြီးတိုနှင့်စိတ်ဓာတ် (ခဲလှသည်) ။
အင်္ဂလိပ် Mastiff ရဲ့ ကြီးမားသော ဦး ခေါင်းနှင့်အပြည့်အဝပတ်ပတ်လည်အရိုး။
Anatolian နှင့်ဂရိတ် Pyrenees ရောမွှေပါတယ် ဦး ခေါင်းခွံ၊ နှာခေါင်း၊ အမြင့်၊ အမြီးတို၊ အရောင်များနှင့်စိတ်ထား (ဉာဏ်ရည်) ။
၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင်မျိုးနွယ်ကိုအမည်ပြောင်းခဲ့သည် Alsatian Shepalute - ယခင်ဂျာမန်သိုးထိန်းအမည်မှ Alsatian 'Alsatian Wolfdog' နှင့် Shepherd နှင့် Malamute ရောနှောခြင်းမှရရှိသည်။
ခြောက်နှစ်ကြာပြီးနောက်, ဒီခွေးတစ် ဦး စင်ကြယ်သောအနွယ်အဖြစ်တီထွင်လျက်ရှိသည်ကတည်းကသူတို့က Shepalute ကျဆင်းသွားခြင်းနှင့်အမေရိကန် Alsatian သို့ပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့်အမြိုးသားကိုပိုမိုသင့်လျော်သောနာမည်ပေးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ထိုကဲ့သို့သော American Kennel Club (AKC) ကဲ့သို့သောအဓိကခွေးဂေဟာရီအသင်းများရှိနေဆဲဖြစ်သည် အသိအမှတ်မပြုပါနဲ့ ဒီဖောက်။ Alsatian ကို National American Alsatian Registry တွင်သာမှတ်ပုံတင်ထားသည်။
ဒါပေမယ့်ဒီခွေးမှာကိုယ်ပိုင် kennel club, National American Alsatian Club (ရှိပါတယ်) NAAC ), ထို 2004 ခုနှစ်တွင် dire Wolf စီမံကိန်းကိုတာဝန်ခံဖြစ်ခဲ့သည်။
Schwarz အဆိုအရအခြားဖောက်သို့ outcrossing ကူညီပေးသည် ကောင်းသောကျန်းမာရေးကိုထိန်းသိမ်းရန် ။ ၎င်းသည်အရာရာကိုရောနှောပြီးပြန်လည်ကျဆင်းစေနိုင်သောကျန်းမာရေးပြissuesနာများကိုပြန်လည်ဖယ်ရှားပေးသည်။
ထို့ကြောင့်သူသည် Alsatian ကိုအခြားခွေးများအဖြစ်ခွဲထုတ်ခဲ့သည်။
အိုငျးရစျ Wolfhound ၎င်း၏ ဦး ခေါင်းခွံ, အမြင့်, ဝါယာကြိုးကုတ်အင်္ကျီ, အလိုလိုသိနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထောက်လှမ်းရေးသည်။
Labrador retriever ၎င်း၏ခြေအဘို့, တိုတောင်းသောအမြီး, အရောင်များနှင့်ထောက်လှမ်းရေးအဘို့။
ချစ်တယ် ၎င်း၏ဘဲဥပုံမျက်စိ, အမြီးတိုနှင့်ဖော်ရွေသည်။
Akita ဦး ခေါင်း၊ နား၊ ခန္ဓာကိုယ်၊ အမြီးတိုနှင့် girth အတွက်ဖြစ်သည်။
အားလုံးဖြတ်ကျော်ပြီးနောက်, Alsatian သည်သူ၏မိဘဝတ်ရည် '' စိတ်ထားနှင့်အသွင်အပြင်မရှိပါ။ ဒါဆိုသူတို့ကိုဘာကွဲပြားစေသလဲ။
သူတို့ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်စတော့ရှယ်ယာခွေးနှင့် Alsatian နှိုင်းယှဉ်
မျိုးပွားအသစ်တစ်ခုကိုမွေးမြူရန်အသုံးပြုသောခွေးတစ်ကောင်များကိုဖောင်ဒေးရှင်းပိုင်ခွေးများဟုခေါ်သည်။ Alsatian များအတွက်၎င်းသည် Alaskan Malamute နှင့် German Shepherd တို့ဖြစ်သည်။
ဒီ Shepalute ရောစပ်မှုနှင့်အတူ Schwarz သည်ဂျာမန်သိုးထိန်းနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်ဟုထင်မြင်ခဲ့သည်။ သူမသည်မျိုးပွားရန်ပိုမိုထွက်ခွာသွားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ရှိသည်အမေရိကန်အယ်လ်ရှီးယန်းကိုပေးသည်။
American Alsatian vs. German Shepherd
နှိုင်းယှဉ် ဂျာမန်သိုးထိန်း US Alsatian ဟာပိုကြီးပြီးပိုလေးတယ်။ သူတို့မှာလိုအပ်တာကပိုရှည်တဲ့အင်္ကျီရှိတယ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပိုမို ဒါပေမဲ့သူတို့ကပိုကောင်းတဲ့ရာသီဥတုအေးသည်းခံနိုင်ပါတယ်။
alsatians လည်းဖြစ်ကြသည် ပိုကျန်းမာ နှင့်ပိုမိုမြင့်မားသက်တမ်းအကွာအဝေးရှိသည်။ သူတို့ကလေ့ကျင့်ခန်းနည်းတယ်၊ လှုပ်ရှားမှုအဆင့်လည်းနည်းတယ်။ အကယ်လို့သင်ဟာပိုပြီးတက်ကြွတဲ့ခွေးတစ်ကောင်ကိုပိုနှစ်သက်ရင်၊ German Shepherds ဟာပိုကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်။
Alaskan Malamute vs. American Alsatian
အခြားမိဘအတွက်, အမေရိကန် Alsatians ဖြစ်ကြသည် ပိုကြီးတဲ့ ထက် Alaskan Malamutes ။ သူတို့ကတစ် ဦး ရှိသည် အင်္ကျီရှည် အရာကိုလည်းထပ်မံဖြည့်တင်းရန်လိုအပ်သည်, ဒါပေမယ့် Malamutes အနုတ်လက္ခဏာဒီဂရီရာသီဥတုသည်းခံနိုင်ပါတယ်။
Alaskan Malamute သည် US Alsatian ထက်ခေါင်းမာသည်။ အဆိုပါ Alsatian ဖြစ်ပါတယ်ရင်တောင် ပိုကျန်းမာ Malamute သည်သက်တမ်းပိုရှည်သည်။
လူကြိုက်များသော TV စီးရီး Game of Thrones မှကြောက်မက်ဖွယ်ဝံပုလွေများသည် Alsatian ဖြစ်သည်ဟုသင်ထင်ကောင်းထင်ပေမည်။
အမေရိကန် Alsatians တိကျတဲ့ရှိသည် အသွင်အပြင်နှင့်အရွယ်အစား ဒါကသူတို့ကိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဝံပုလွေနဲ့ပိုပြီးဆင်တူတယ်။
ဒီခွေးတစ်ကောင်ရှိပါတယ် rounded, တြိဂံနားရွက် သူတို့ရဲ့ထိပ်ပေါ်မှာဆောက်ထားတဲ့နေကြသည် ကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့် sloping ခေါင်းကို ။ သူတို့ရဲ့ ဗာဒံသီး မျက်လုံးများ သေးငယ်သောသို့မဟုတ်အလတ်စားအရွယ်ရှိပြီးအဝါရောင်မှအညိုရောင်အကြားအရောင်ရှိသည်။ Alsatians တစ် ဦး ရှိသည် နှာခေါင်းတွင်း ဒါပေမယ့်သူတို့ရဲ့ အမှောင်ထု တစ်ခါတစ်ရံတွင်မုန့်သို့မဟုတ်အဖြူဖြစ်နိုင်သည်။
ဒီကြီးမားတဲ့ခွေးတစ် ဦး ရှိပါတယ် ကြွက်သား နှင့် ကိုယ်ခန္ဓာ ဖြင့်အဆုံးသတ်သည် ကျယ်ပြန့် tapered အမြီး ။ အဆိုပါ Alsatian တစ်ရှိပါတယ် အထူနှင့်သိပ်သည်းအရိုးဖွဲ့စည်းပုံ နှင့်အတူပေါင်းစပ် နောက်ကျောနှင့်ရင်ဘတ်ကျယ်ပြန့် ။
American Alsatian မှာအင်္ကျီနှစ်မျိုးရှိတယ်။ မဟုတ်ပါ hypoallergenic ဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါအထူ ဆောင်းရာသီကုတ်အင်္ကျီ ကြမ်းတမ်းပြီးသိပ်သည်းသောအပြင်ဘက်ဆံပင်နှင့်နူးညံ့သောအောက်ခံအင်္ကျီပါသောနှစ်ထပ်အင်္ကျီဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းသည်အလတ်စားအလျားရှိပြီး၎င်းခွေးတစ်ကောင်ကိုသိုးမွှေးကြည့်နေသည်။
The နွေရာသီကုတ်အင်္ကျီ ပါးလွှာပြီးတိုပြီးတိုတဲ့အပြင် undercoat တွေအားလုံးကိုထုတ်ပစ်လိုက်တယ်။
ဒီ hound နှင့်အတူမျိုးစုံအင်္ကျီအရောင်များကိုရှိပါတယ် silver sable အများဆုံးနှစ်လိုဖွယ်တအဖြစ်။ American Alsatian လည်းဝင်ပါတယ်။
Wolf ကမီးခိုးရောင်ငွေ / Sable
Tri sable ရွှေမီးခိုးရောင်
Tri ငွေ Sable
သူတို့ကဒီအရောင်များကိုမဆိုပြသကြဘူးလျှင်အမေရိကန် Alsatian ကခွေးကလေးရတဲ့အခါ, စိတ်မပူပါနဲ့။ သူတို့ဟာနူးညံ့ပျော့ပျောင်းတဲ့မှောင်မိုက်တဲ့ကုတ်အင်္ကျီတစ်ထည်နဲ့မွေးဖွားလာကြတာကခရင်မ်ကိုပေါ့စေတယ်
သူတို့လှည့်သည့်အချိန်တွင်သူတို့ကသူတို့ rougher အရွယ်ရောက်အင်္ကျီကိုရပါလိမ့်မယ် ၁ နှစ်အရွယ် ။
အမေရိကန် Alsatians ဘယ်လောက်များများလဲ
အဆိုပါ Alsatian တစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ် ကြီးမားသောသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီကြီးအရွယ် အထီးန်းကျင်ကြီးထွားနိုင်သည့်ခွေး 26 မှ 32 လက်မ (၆၆ မှ ၈၁ စင်တီမီတာ) ရှည်။ အလေးချိန်ရှိသည် 90 မှ 110 ပေါင် (၄၁ မှ ၅၀ ကီလိုဂရမ်) ။ အမြိုးသမီးမြားအကြောင်းကိုအကွာအဝေး 25 မှ 28 လက်မ (၆၄ မှ ၇၁ စင်တီမီတာ) အမြင့်ရှိပြီးအလေးချိန်ရှိသည် 85 မှ 105 ပေါင် (၃၉ မှ ၄၈ ကီလိုဂရမ်) ။
အမေရိကန်အယ်လ်ရှီးယားယန်ခွေးများသည်အသက် ၃ နှစ်အရွယ်တွင်အရွယ်ရောက်ပြီး ၉ နှစ်အရွယ်အထိဖြည့်နိုင်သည်။
သူတို့ရဲ့ကြီးမားတဲ့အရွယ်အစားနှင့်အတူသူတို့ အဆင်ပြေလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ တိုက်ခန်းတစ်ခန်းမှာနေတယ်။ ဒီအပေါက်ကျယ်ဝန်းခြံနှင့်အတူနေအိမ်၌နေထိုင်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
ဒီသားပေါက်ကတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်နဲ့တူရင်တောင်သိုးသငယ်လိုနူးညံ့သိမ်မွေ့တယ်။ Schwarz ဟာ Alsatian ကိုအပေါင်းအသင်းများအတွက်စိတ်ထားရှိချင်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
ဒီ hound ဘယ်လိုထွက်လာတယ်ဆိုတာကြည့်ရအောင်။
သူတို့ဟာအန္တရာယ်ရှိတဲ့ပုံရပေမယ့်သူတို့ဟာရန်လိုတဲ့၊ အမေရိကန် Alsatian ကတည်းကသူတို့ကိုကြောက်စရာမလိုပါ ဖော်ရွေပြီးချဉ်းကပ်လွယ်သော , ဒါပေမယ့်ဒီခွေးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် ဝေးကွာ လူစိမ်းသို့။ မည်သူစိမ်းများကသူငယ်ချင်းများဖြစ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်မည်သည့်ခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်နိုင်သည်ကိုသိရန်သူတို့အနေဖြင့်သင့်လျော်သောပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးလိုအပ်သည်။
ကြီးစွာသော furry ယုံကြည်စိတ်ချရသူဖြစ်ရန်ကြီးပြင်းလာခဲ့ရာဤခွေးတစ်ကောင်သည်မိသားစုများနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ခြင်းသည်အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ Alsatians တွေဟာနို့တိုက်သတ္တဝါတွေဖြစ်ပြီးကလေးတွေနဲ့အတူကောင်းကောင်းရနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ချစ်မြတ်နိုးရသူများနှင့်အတူအိပ်ရာပေါ်တွင်အနားယူလိုသည်။
အခြားခွေးများနှင့်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များနှင့်လည်းအဆင်ပြေသည် မြင့်မားသောလုယူရာ drive ကိုမရှိကြပါဘူး ။
ကြီးမားတဲ့ hound ပေမယ့် mouse ကိုအဖြစ်အသံတိတ်
သင်ခွေးတစ်ကောင်ကိုလိုချင်လျှင်ခွေးတစ်ကောင်သည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ အမေရိကန် Alsatian ဟောင်၊ ညည်းသံ၊ ။ အဆင်မပြေ - သင်သူတို့ကိုစောင့်ခွေးဖြစ်ဖို့မရေတွက်နိုင်ပါ။
သူတို့ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့မဖြစ်နိုင်ပေမယ့်သူတို့ကအဖြစ်ခြွင်းချက်ဖြစ်ကြသည် ဝန်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်ကုထုံးခွေး ။
Alsatian သည်အေးဆေးတည်ငြိမ်သောမျိုးပွားတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းတို့အားရွေ့လျားသတ္တဝါများသို့မဟုတ်ဝက်ရူးပြန်ရောဂါရှာဖွေတွေ့ရှိသည့်ခွေးတစ်ကောင်အဖြစ်လုပ်ကိုင်ရန်၊ PTSD ရှိသူများ၊ အကြားအာရုံဆုံးရှုံးမှုနှင့်အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာကိုကူညီရန်ခွင့်ပြုသည်။ နေသမျှကာလပတ်လုံးကကြမ်းတမ်းအလုပ်မဟုတ်ဘူးအဖြစ်, သူတို့ကကိုင်တွယ်နိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ homebody သူငယ်ချင်း
American Alsatian သည်ပိုင်နက်နယ်မြေဖြစ်လေ့ရှိပြီးအိမ်တွင်တည်းခိုခြင်းကိုပိုနှစ်သက်သည်။ အခြားကြီးမားသောဝတ်ရည်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဤ pooch သည်အိမ်နှင့်ဝေးရာသို့မထွက်သွားပါ။ ဒီတော့သူတို့အရွယ်အစားရှိပေမဲ့မင်းရဲ့ဝံပုလွေခွေးကလေးဟာသင့်ခြံစည်းရိုးအောက်မှာခုန်ကျော်နေတာဒါမှမဟုတ်တူးနေတာကိုမတွေ့ရဘူး။
သငျသညျဒီဖောက်ဘို့သွားလျှင်, သင်တစ် ဦး clingy ခွေးရတဲ့လိမ့်မယ်။ ဤသည်ခွေးဟူသောဝေါဟာရကိုလူသိများသည် Alsatian 'bonding' ဆိုလိုတာကပိုင်ရှင်တွေကပျောက်နေတယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုချက်ချင်းရှာခိုင်းလိမ့်မယ်။
ဤသစ္စာစောင့်သိသောခွေးများသည်သူတို့၏သခင်များနှင့်တတ်နိုင်သမျှအနီးကပ်ကပ်ပါလိမ့်မည်။ ပေါင် ၁၀၀ ပေါင်ပေါင်ခွေးတစ်ကောင်အတွက်သင့်ကိုယ်သင်ပြင်ဆင်ပါ။
သငျသညျအလုံအလောက် - ခွေးချင်လျှင်, ဒီဖောက်မှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုပါ! သူတို့တစ်တွေတိုးမြှင့်သွားနိုင်ပါတယ်တူသောသူတို့ကြည့်ရင်တောင်သူတို့ကအရမ်းလှည့်ပတ်ရွေ့လျား၏ပရိသတ်များမဟုတ်။ အခြားကြီးမားသောအရွယ်အစားမျိုးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက၎င်းတို့တွင်ရှိသည် နိမ့်စွမ်းအင်အဆင့်ဆင့် - ဒါပေမယ့်သူတို့နေဆဲလေ့ကျင့်ခန်းဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
အနည်းဆုံးအမေရိကန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့လိုတယ် တစ်နာရီတစ်နာရီ ။ သူတို့သည်သင်နှင့်အတူအချိန်ဖြုန်းနိုင်သည့်အတွက်သူတို့သည်ပတ်ဝန်းကျင်သို့မဟုတ်ဥယျာဉ်အတွင်းပတ် ၀ န်းကျင်တွင်လမ်းလျှောက်ခြင်းကိုနှစ်သက်ကြသည်။
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန်သို့မဟုတ်လေ့ကျင့်ရန်အကောင်းဆုံးအချိန်မှာအေးခဲသည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ သူတို့က အများဆုံးတက်ကြွ ညနေနှောင်းပိုင်းနှင့်ညနေပိုင်းအထိဖြစ်သည်။
ဒီဖောက်ဖြစ်ပါတယ် အသိဉာဏ် , ဒါကြောင့်သင်ကသူတို့ကိုလေ့ကျင့်ရန်လွယ်ကူသောအချိန်ရပါလိမ့်မယ်။
နာခံမှုဖြင့်စတင်ပါ လေ့ကျင့်ရေး အထူးသဖြင့်သူတို့သည်သင်၏အိမ်တွင်နေထိုင်ကြမည်ဆိုလျှင်၊ အရွယ်အစားအားဖြင့်သူတို့သည်ငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းကမိမိကိုယ်ကိုမည်သို့ပြုမူရမည်ကိုလေ့လာရန်လိုအပ်သည်။
သင်၏ American Alsatian ကိုလေ့ကျင့်သည့်အခါအပြစ်ပေးခြင်းကိုရှောင်ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာအဖြစ်သတ်မှတ်ပါ alpha , တင်းကျပ်ပေမယ့်ရယူထားသောနှင့်အားပေးမှုပေးသည်။
ဒီဗီဒီယိုမှာ Alsatians တွေကို doggy boot camps တွေမှာဘယ်လိုလေ့ကျင့်ပေးတယ်ဆိုတာကိုသင်တွေ့နိုင်တယ်။
Alsatian ရဲ့စိတ်ထားအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူပြီးနောက်, သူတို့ကိုဂရုစိုက်ဖို့ဘယ်လိုသိရန်အချိန်ပါပဲ။
အမေရိကန် Alsatian ဖြီးလိမ်းပုံအချိန်ဇယား
နွေရာသီရောက်သောအခါများသောအားဖြင့်မတ်လမှAprilပြီလများအတွင်း Alsatians များသည်သူတို့၏အတွင်းပိုင်းဆံပင်အားလုံးကိုနွေရာသီဝတ်ရုံထဲသို့ချပစ်လိမ့်မည်။
သင့်ခွေးသည်ဤအချိန်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ပိုမိုမှောင်လာမည်သို့မဟုတ်ပိုပါးလာသည်မှာ undercoat မရှိပါ။ Alsatian ဟာယားတာကိုခံစားရလိမ့်မယ်၊ ကျယ်ပြန့်သွားသံမဏိဖြီး ။ လုပ်ပါ တစ်ရက်သို့မဟုတ်အခြားနေ့ကတစ်ကြိမ် သွန်းလောင်းကာလအတွင်း။ အလုံးစုံတို့သည်မှုတ်ကြလိမ့်မည်။
ဆိုလိုသည်မှာလည်းသင်၏လေဟာနယ်သည်သွန်းလောင်းသောလုပ်ငန်းစဉ်ကြာသော အချိန်မှစ၍ အလုပ်များစွာနှင့်ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည် တစ်လလောက် ။ စက်တင်ဘာလတွင်သူတို့၏ undercoat ပြန်ကြီးထွားလာလိမ့်မည်။
သူတို့ရဲ့သွန်းလောင်းကာလအပြင်ဘက်မှာသို့မဟုတ်သူတို့ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလကုတ်အင်္ကျီရှိသည့်အခါအနည်းဆုံးသင့်ရဲ့ Alsatian ကိုတိုက်ဖို့ကောင်းပါတယ် တစ်ပါတ်တစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ် ။ သူတို့၏လှပသောဆံပင်သည်အနံ့ကင်း။ ဖုန်မှုန့်များကိုလည်းတွန်းလှန်ပေးသောကြောင့်၎င်းတို့သည်သာလိုအပ်သည် ရေချိုးသည် လိုအပ်တဲ့အခါ။
အနည်းဆုံး တစ်လတစ်ကြိမ် မဆိုဖုန်သို့မဟုတ် globs အဘို့မိမိတို့နားရွက်စစ်ဆေးပါ။ ရောဂါကူးစက်မှုကိုရှောင်ကြဉ်ပြီးရေချိုးတိုင်းသို့မဟုတ်အပြီးတွင်သူတို့ကိုစိုစွတ်သောအဝတ်ဖြင့်ဆေးကြောပါ။ သူတို့ရဲ့လက်သည်းတွေအတွက်တော့၊ ချုံ့ပါ တစ်နှစ်တစ်ကြိမ် ။
သင်၏ Alsatian ကိုအစာကျွေး
မင်းရဲ့ American Alsatian ကိုပေးပါ ခွက်နှစ်ခု ၏ ပရီမီယံအရည်အသွေး kibble တစ်နေ့လျှင်။ သငျသညျဗီတာမင်နှင့်သတ္တုဓာတ်များအတွက်ခွေးဖြည့်စွက်အမှုန့်ကိုထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
ဘာလို့မဖြစ်ရမလဲ သူတို့ရဲ့ပန်းကန်ထိပ်ဆုံး အရသာထည့်ရန်အိမ်တွင်းဒိန်ခဲ, ဟင်းရည်နှင့်ဖျက်စီးထားသောဒိန်ခဲနှင့်အတူ? တစ်ခါတစ်ရံအနည်းငယ်ချက်ပြုတ်ထားသောကြက်သားတစ်ကောင်ကိုသူတို့ထမင်းများထဲတွင်ထည့်ပါ။ သူတို့ကsurelyကန်အမှန်ချစ်ကြလိမ့်မည်!
ငယ်ရွယ်သော Alsatians အတွက်ထောက်ပံ့ပေးပါ သုံးခွက်လေးခွက် တစ်နေ့လျှင်ခြောက်သွေ့သောခွေးပေါက်စအစားအစာ။ သူတို့ရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးအစာစားဘို့, သူတို့ကိုသာ kibbles အစာကျွေးပါ။ အောက်ပါဟင်းလျာများအတွက်၊ အသားများ၊ အိမ်တွင်းဒိန်ခဲများ၊ ကြက်သားနှင့်ဆန်များဖြင့်ဟင်းရည်များကိုထပ်မံစားရန်ဆွဲဆောင်နိုင်သည်။ သင့်ခွေးကလေးသည် 1 နှစ်အရွယ်အထိအသက်ရှည်သည်အထိသင်ဤအစားအစာကိုဆက်လက်စားသောက်နိုင်သည်။
သင့်ခွေးကိုအစာမကျွေးအောင်ဂရုစိုက်ပါ။ သူတို့ကိုသင့်တော်သောနို့တိုက်ကျွေးသည့်အချိန်တွင်အသုံးချပါစေ။ ထို့ကြောင့်သင့်ခွေးတစ်ကောင်သည်သင့်တော်သည့်ပမာဏနှင့်သူလိုအပ်သောအာဟာရအားလုံးကိုရရှိလိမ့်မည်။
လက်ရှိတွင်ကျန်းမာရေးပြissuesနာမရှိပါ။ ကကျန်းမာဖောက်ဖြစ်လာဘို့အ Alsatian ဖွံ့ဖြိုးဆဲအတွက် Schwarz ရဲ့ ဦး စားပေးတစ်ခုမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကနေမကောင်းမဟုတ်ခွေးနှင့်လိုင်းဆက်လက်ဖွငျ့ဤအမှုကိုပြု၏။ သို့သော်ကျန်းမာရေးပြexperiencedနာများကြုံတွေ့ရသောခွေးအချို့ရှိနေသေးသည်။
တံတောင်ဆစ်နှင့် Dysplasia တင်ပါးဆုံရိုး
ထိုအရာများရှိလင့်ကစားသင်သည်သင်၏အမေရိကန်အယ်လ်ရှီးနီးယားလူမျိုးများနှင့်သူတို့၏သက်တမ်းကြာသောကြောင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာအတူနေရမည် 12 မှ 14 နှစ် ။ Dire Wolf စီမံကိန်းသည်သူတို့၏ကျန်းမာရေးနှင့်အသက်ရှည်မှုကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်သည်။ သူတို့ကဒီဖောက်ထွင်းမှုကိုပျမ်းမျှသက်တမ်း ၁၅ နှစ်မှ ၂၀ နှစ်အထိရိုင်းကောင်တွေနဲ့တူချင်ကြတယ်။ သူတို့အောင်မြင်မယ်ဆိုရင်၊ သင့်ရဲ့ခွေးဟာနောက် ၆ နှစ်ကြာမင်းနဲ့အတူရှိနေနိုင်တယ်။
သငျသညျ Alsatian အကြောင်းကိုအားလုံးလေ့လာသင်ယူပါတယ် - ယခုဘယ်လောက်နှင့်တ ဦး တည်းရဖို့ကိုသိရန်အချိန်ပါပဲ။
သူတို့ကအတော်လေးသစ်ကိုဖောက်ဖြစ်ကြသောကြောင့်, ဒီရှားပါးခွေးတစ်ကောင်စျေးပေါလာလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အမေရိကန်အယ်လ်ရှီးယားယန်ခွေးများတွင်ပျမ်းမျှဈေးနှုန်းရှိသည် $ 2000 မှ $ 3000 ။
ခွေးပေါက် (၅) ကောင်မှ (၁၂) ကောင်အထိအရွယ်အစားသေးငယ်သောအခါတွင်သူတို့၏စျေးနှုန်းကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည့်ကွဲပြားခြားနားသောအသွင်အပြင်နှင့်စိတ်ထားရှိလိမ့်မည်။ အချို့သောခွေးပေါက်စတစ်မျိုးရရှိရန်မျိုးပွားသူများ၏တည်နေရာ၊ အရည်အသွေးနှင့်အရည်အသွေးပေါ် မူတည်၍ အချို့သောအယ်လ်စီတီယန်းများသည်ဒေါ်လာ ၁၀,၀၀၀ အထိကုန်ကျနိုင်သည်။
နာမည်ကြီးအမေရိကန် Alsatian Breeders
သင်၏ Alsatian ကိုရှာဖွေရာတွင် Schwarz နှင့် NAAC မှအသိအမှတ်ပြုခံရသောနာမည်ကောင်းမျိုးဆက်များစာရင်းဖြစ်သည်။
အနက်ရောင် kennels (အော်ရီဂွန်)
Vallecito ၏ Wolf Wolf ကခွေး (ဝါရှင်တန်)
Fennario ၏ Dire Wolf ကခွေးများ (ကော်လိုရာဒို)
သငျသညျတ ဦး တည်းမွေးစားသို့မဟုတ်ကယ်တင်ရန်ရှာနေလျှင်, စစ်ဆေးပါ နံနက်။ Alsatian ကယ်ဆယ်ရေး အမြတ်အစွန်းမယူသောကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၊ ခွေးများရှိလျှင်။
ခွေးတစ်ကောင်လာသောအခါသင်၏မိသားစုနှင့်နေထိုင်မှုပုံစံနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိ၊ မရှိစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ သင်သည်သူတို့၏ဝတ်စားဆင်ယင်မှုနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းလိုအပ်ချက်များကိုလည်းကျူးလွန်နိုင်ရမည်။
အကယ်၍ American Alsatian သည်သင့်အတွက်သင့်တော်သည့်အဖော်ဟုတ်မဟုတ်မသေချာလျှင်သင်ဤသည်မှာအခြားထိပ်တန်းဝံပုလွေမျိုးနွယ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပုံကိုဤတွင်ဖော်ပြထားသည်။
ရှိလော Shepherd vs. အမေရိကန် Alsatian
ရှိလော Shepherd ( အရင်းအမြစ် )
အမေရိကန်အယ်ဆာရှန်သည် သေးငယ်သည် ထက် ရှိလောမြို ။ သူတို့က လျော့နည်းတက်ကြွ နှင့်ရှိလောထက်လျော့နည်းလေ့ကျင့်ခန်းလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ သင့်တွင်အခြားအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များရှိပါကရှိလောသိုးထိန်းများသည်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်မရင်းနှီးသောကြောင့် Alsatian တစ်ခုကိုရယူပါ။
ရှိလောသည်တိရိစ္ဆာန်ခွေးသို့မဟုတ်စောင့်ကြည့်ရေးခွေးကဲ့သို့သောအလုပ်မျိုးများစွာကိုလုပ်နိုင်သည်။ သူတို့ကအစဟောင်လေ့; သင်တစ် ဦး ချင်လျှင် ပိုပြီးတိတ်ဆိတ်တဲ့ခွေး ဒါကြောင့်အမေရိကန် Alsatian ရဖို့ပိုကောင်းတယ်။
American Alsatian vs. Native American India Dog
အမေရိကန်အင်ဒီးယန်းခွေး (သို့မဟုတ်) NAID ( အရင်းအမြစ် )
အမေရိကန်အယ်ဆာရှန်သည် ပိုကြီးတဲ့ ထက် အမေရိကန်အင်ဒီးယန်းခွေး (NAID), ဒါပေမယ့်သူတို့အတူတူနီးပါးအလေးချိန်။
alsatians လိုအပ်သည်သောပိုရှည်အင်္ကျီရှိသည် ပိုပြီးဖြီးလိမ်းပုံ ။ သူတို့မှာလည်းရှိတယ် ပိုပြီးအင်္ကျီအရောင်ရွေးချယ်စရာ ။
NAID ကပိုပြီးဟောင်နေတယ်၊ ​​ဒါကြောင့်သင်ကတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့ခွေးတစ်ကောင်ကိုပိုနှစ်သက်ရင် Alsatian ကိုရယူပါ။ NAID များသည်အမဲလိုက်ခြင်းနှင့်ငါးဖမ်းခြင်းအဖော်များဖြစ်ခြင်းကြောင့်တက်ကြွသောလူနေမှုပုံစံဖြင့်နေထိုင်သူများအတွက်လည်းကောင်းမွန်သည်။
ခွေးနှစ် ဦး စလုံးသည်ကျန်းမာသန်စွမ်းသောမျိုးပွားများဖြစ်သော်လည်း NAID တွင်ကျန်းမာရေးပြissuesနာများရှိပြီး Alsatian ထက်အသက်ပိုရှည်သည်။
ဘုရင် Shepherd vs. အမေရိကန် Alsatian
ဘုရင်သိုးထိန်း အရင်းအမြစ် )
The ဘုရင်သိုးထိန်း German Shepherd, ရှိလော Shepherd, Alaskan Malamute နှင့် Great Pyrenees ပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဤကြီးမားသောမိဘမျိုးပွားမှုများရှိသော်လည်း Alsatian သည်ဖြစ်သည် ပိုကြီးတဲ့ ဒီ crossbreed ထက်။
King Shepherd သည်အလုပ်အတွက်ပိုမိုသင့်တော်သည်။ မကြာခဏဟောင်လေ့ရှိသောကြောင့်သူတို့သည်အစောင့်ခွေးများဖြစ်နိုင်သည်။ သင်တစ် ဦး လိုလျှင် အသံတိတ်ဖောက် , အ Alsatian ပိုကောင်းတဲ့ option ကိုဖြစ်ပါတယ်။
သင်အမြဲတမ်းလိုချင်ခဲ့လျှင် အဖော်များအတွက်ကြီးမားသောခွေးတစ်ကောင် , အမေရိကန် Alsatian တို့သည်ကြီးစွာသောကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်အပိုဆုသူတို့ရှိသည် အလတ်စားလှုပ်ရှားမှုအဆင့်ဆင့်မှအနိမ့် , သူတို့ရဲ့အိမ်တွေမှာအပန်းဖြေရန်ချစ်သောသူအဘို့အပြီးပြည့်စုံသော။
ဒီဖောက်ဖြစ်ပါတယ် လေ့ကျင့်ရန်လွယ်ကူသည် သူတို့ကိုခွေးပိုင်ရှင်တွေအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်စေတယ်။ သူတို့ကတစ် ဦး လည်းဖြစ်ကြ၏ ကျန်းမာဖောက် ဒါကြောင့်သင်ဤတိရိစ္ဆာန်ဆရာလာရောက်လည်ပတ်သူများကိုစိတ်ပူစရာမလိုပါ။
အကယ်၍ သင်သည်တိုက်ခန်းငယ်တစ်ခန်းတွင်နေထိုင်ပါကဤခွေးသည်အလွန်ကြီးမားပြီးနေရာများစွာယူလိမ့်မည်ဟုစိတ်စွဲမှတ်ထားပါ။ Alsatians များအတွက်အကောင်းဆုံးနှင့်ကိုက်ညီကြသည် ကျယ်ဝန်းသောအိမ်များ ထိုကဲ့သို့သောအိမ်နောက်ဖေးသို့မဟုတ်ကျေးလက်ဒေသနှင့်အတူရှိသူများအဖြစ်။
အဆိုပါ Alsatian တစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ် မြင့်မားသောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်, ဒါကြောင့်သင်သည်သူတို့၏ဖြီးလိမ်းပုံလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖို့အချိန်ပိုမိုကျူးလွန်ရပါလိမ့်မယ်။ ဤသွန်းလောင်းများသည်ဓာတ်မတည့်သူများနှင့်သူတို့၏အိမ်တစ်အိမ်လုံးရှိခွေးဆံပင်ကိုမကိုင်တွယ်နိုင်သူများအတွက်မသင့်တော်ပါ။
American Alsatian ကိုရယူဖို့စီစဉ်နေပါသလား။ မင်းရဲ့ခရီးကိုမင်းတို့ကြားချင်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ကိုအောက်ပါမှတ်ချက်အပိုင်းအတွက်သိပါစေ။
ရှငျဘုရငျကိုသိုးထိန်းဖို့ Ultimate လမ်းညွှန်
ချောကလက်ဓာတ်ခွဲခန်းနှင့်အပြာရောင် heeler ရောမွှေပါ
ရုပ်ပုံများနှင့် pitbull အမျိုးအစားများစာရင်း
အပြာရောင်နှင့်အနီရောင် heeler ခွေးပေါက်လေးများ
blue french ခွေးဘီလူးတစ်ကောင်ဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ